कहिले ढल्ने हो यो लामो रात ? : रवीन्द्र समीर « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७७, २ बैशाख १३:५७
–डा. रवीन्द्र समीर
अहिले बाताबरण निकै मनमोहक छ । रुखले पालुवा लगाएका छन् । चराहरुको चिरबिरले बसन्त ऋतुलाई रंजन गर्दैछन । स्वच्छ हावा बहिरहेको छ । क्षितिजमा हिमाल मुस्कुराएका छन् ।
डांडाकाँडाले हरियो पछ्यौरा ओढेका छन् । आकासमा जुनतारा चम्किएका छन् । कतै पनि धुलो, धुँवा तथा कोलाहल छैन । पशुपंक्षी तथा बनस्पतिले आफुलाई सुरक्षित ठानेका छन् ।
घरको खाना, आराम तथा धपेडीविहिन जीवनशैलीको कारण मान्छेहरु स्वस्थ छन् । ब्यस्त मान्छेहरु पनि परिवारसंग मिठा पल व्यतित गरिरहेका छन् । अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु रित्ता छन् ।
प्रदुषणको कारण हाम्रा आँखा, छाला तथा श्वासमार्गमा एलर्जी भएको छैन । रुघाखोकी लागेको छैन । सास फेर्न गाह्रो भएको छैन । फोक्सोमा प्रचुर अक्सिजन भरिएको छ । जंक फुड, रेस्टुरेन्ट तथा होटलका कृत्रिम खानाले कसैको पनि पेट बिगारेको छैन । पाचन प्रणाली आफ्नो लयमा फर्किएको छ । कामको तनाब, दिनचर्याको तनाब तथा ट्राफिक जामको तनाब शुन्यप्राय छ ।
लाग्छ, सधै जीवन यस्तै थियो । धुलो, धुँवा, हिलो, चर्को आवाज, कोलाहल कहिल्यै थिएन र अब हुने छैन । सहर पहिलोपटक गाउँ भएको छ । हामीसंग भएका सामग्री आफैलाई बढी भएको छ । कुनै कपडा किन्ने रहर छैन । बाहिर खाने इच्छा छैन । कसैलाई भेट्ने चाह छैन ।
यतिमात्र हैन अहिले हामीले गते र बार बिर्सेका छौं । ती गते र बार मान्छेले दिएका नाम मात्र हुन् । प्रकृतिले हरेक दिन उस्तै दिएको हुन्छ ।
मनमा एक तमासको डर छ । आँखाले नदेखिने कोरोना भाइरसले पृथ्वी ठप्प पारेको छ । आफ्ना हातसंग शंका छ । आफ्ना घरका सामानसंग शंका छ । आफन्तसंग शंका छ । मान्छेसंग भेट्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ ।
धैर्यताको बिकल्प छैन । नयाँ दिन आउन यो रात ढल्नुको बिकल्प छैन । कति लामो रात हो यो ?
चिन्ताको कुनै अर्थ छैन । जीवनमा जे जे आए, ती स्वीकार्य भए । तीता पल, मिठा पल, सुन्दर पल, कुरूप पल । अब आउने पल पनि स्विकार्नु पर्छ, चुपचाप । सहनु पर्छ, चुपचाप । प्रकृति बदलियो अब स्वीकृति बदलिनु जरुरि छ ।
शक्ति, बैभव र प्रगतिको परिभाषा बदलियो अब हामीलाई त्यसलाई हृदयंगम गर्नु जरुरि छ । सुरक्षाको परिभाषा बदलियो, सत्रुको परिभाषा बदलियो, मित्रको परिभाषा बदलियो, छनोटको परिभाषा बदलियो …अब हामीले आफुलाई पढ्नु जरुरि छ, को हुँ भनेर चिन्नु जरुरि छ ।
–अर्जुन पाण्डे हात खुट्टा र ढाड दुख्ने बाछाती र मुटु दुख्ने आमालाईगाउँको त्यो सानो घरमा